Android လုလင်: June 2014
အကြောင်းအရာ Huawei Firmware, ကွန်ပြူတာနဲ့ ဆက်သွယ်ရာ
UNI Android Tools service သမားတွေ ဆိုင်သမားတွေ အတွက် အသုံးဝင်မဲ့ tools တစ်ခု
ဒီတစ်ခါ service သမားတွေ ဆိုင်သမားတွေ အတွက် အသုံးဝင်မဲ့ tools တစ်ခုလေတွေ့ လာလို့ရှယ်ယ်ပေးလိုက်ပါတယ် လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ FlashBoot Mode , Recovery Mode, Download Mode,
Reset Gmail,Bypass Pattern Lock,Wipe Data,Root,Unroot,Apk Install,စသည့်တို့ အပြင် တစ်ခြားလုပ်ဆောင်ချက်တောတောများကို အလွယ်တစ်ကူ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်
ရေးတဲ့အချိန် 6:00 AM3comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
သင့် ဖုန်းကိုလေလေးတစ်ချက်မှုတ်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ Lock ပွင့်စေမဲ့ MUnlock ( for Android )
ဒီကောင်လေးကတော့ အားလုံးကြိုက်နှစ် သက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်ဗျာ. သင့် ဖုန်းကိုလေလေးတစ်ချက်မှုတ်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ Lock ပွင့်စေမယ်လို့ ပြောထားပါတယ်. ကျွန်တော်လဲ
မစမ်းရသေးဘူးဗျ. ဟီး. အောက်မှာဒေါင်းယူနိုင် ပါပီဗျာ.
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.............................. Hangouts နောက်ဆုံးထွက် Virsion (2.1.) ပါ Android 2.3 နဲ့အထက်မှာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ................
Download : (14.81)MB
Friend Caster Pro for Facebook v5.4.5 Apk
-facebook သုံးသူ​တွေအတွက်​ ​ဆော့ဖ်​ဝဲ
​ကောင်း​လေးတစ်​ခုဖြစ်​တဲ့ Friend Caster
PRO v5.4.5 ဆိုတဲ့ android ဖုန်းသုံး
application ​လေးတစ်​ခုကို တင်​​ပေးလိုက်​
ပါတယ်​။PRO Version ​လေးပါ။
facebook offical app လိုပဲ စွမ်း​ဆောင်​နိုင်​မှု
features ​တွေများစွာ ပါဝင်​ပါတယ်​။
ပြီး​တော့ facebook accounts ​ပေါင်းများစွာ
ကိုလည်း ဒီ App ​လေးတစ်​ခုထဲမှာဘဲ
fb အ​ကောင့်​န်​အများကြီး အသုံးပြုသူ​တွေ
အကြိုက်​​တွေ့​စေမယ့်​ App ​လေးပါ-
-ဒီ application လေးကို
မှာ ဝယ်ယူအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ $4.99
ပေးဝယ်ရမှာဖြစ်ပြီး၊အခုဒီ post လေးမှာတော့
FREE ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီး အသုံးပြုနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်-
-Apk File Size 6.3MB ရှိပြီး​တော့
Android OS Version 2.1 နှင့်​ အထက်​ရှိထား​သော android ဖုန်းများမှာ
ဆိုတဲ့အစိမ်း​ရောင်​ button ရဲ့​အောက်​က
Direct download link ဆိုတဲ့စာသား
မိမိဖေ့ဘုတ်မှာ friend ဘယ်လောက် အပျို အအိုဘယ်လောက် စသဖြင့်မျိုးစုံကိုတစ်နေရာထဲကဖော်ပြပေးတဲ့ဆော့ဝဲလ်(Android)
မိမိတို့ရဲ့ ဖေ့ဘုတ် မှာ သူငယ်ချင်းဘယ်လောက်ရှိတယ် ယောက်ျားလေး ဘယ်လောက် မိန်းကလေးဘယ်လောက် အပျိုဘယ်လောက် လက်ထပ်ပြီးသူဘယ်လောက် ဘယ်သူ့မွေးနေ့ကဘယ်ရက်
အနီးဆုံးမွေးနေ့ရောက်မယ့်သူတွေ စသဖြင့် ဖေ့ဘုတ်နှင့်ပတ်သက်သမျှကို ဒီဆော့ဝဲလေးထဲမှာ အကုန်ကြည့်နိုင်ပါတယ် အားလုံးအသုံးဝင်မယ်ထင်လို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ် အရပ်ကတို့ေ၇
Hauwei Y511-T00 firmware နှင့် တင်နည်း
Y511-T00 ဖုန်းတွေမှာ မြန်မာစာအဆင်မပြေတာကြောင့် မြန်မာစာစမ်းရင်း ဖမ်းဝဲပြန်မတက်တာတွေ ကြုံတာများနေကြပါပြီ… ကျွန်တော်လည်းအပါအ၀င်ပေါ့… အခုအဲဒီကောင်အတွက် ကျွန်တော်အဆင်ပြေလို့ တင်နည်းကိုပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်........
Y511-T00 firmware ကိုအေက်မျာဒေါင်းလိုက်ပါ။
Huawei Original firmware link
ဒေါင်းလို့ပြီးပြီဆိုရင် ရလာတဲ့ rar ဖိုင်ကိုဖြည်လိုက်ပါ။ ဖိုဒါတစ်ခုရပါမယ်.. အဲ့ဖိုဒါကိုထပ်ဖွင့်လိုက်ပါ။ အထဲက dload ဆိုတဲ့ဖိုဒါကို ကော်ပီယူပြီး format ရိုက်ထားတဲ့ sd ကဒ်ထဲကို ကူးထဲ့လိုက်ပါ။ dload ဆိုတဲ့ ဖိုဒါထဲမှာ update.zip ပါပါတယ်..အဲဒါကိုသပ်သပ်ခွဲထုတ်စရာမလိုပါဘူးမေ့ထားလိုက် dload ဆိုတဲ့ကောင်ကိုသာ Card ထဲပစ်ထည့်လိုက်...ပြီးရင်တော့ ဖုန်းကို Recovery ၀င်ပြီးတင်ရမှာပါ။ recovery ၀င်ဖို့ကတော့ power ကို ခဏဖိထားပါ... တစ်ချက် တုန်သွားပြီဆိုရင် လွှတ်ပြီး vol up + vol down နှစ်ခုကို စုံနှိပ်ပေးထားပါ... recovery ကိုဝင်သွားပါလိမ့်မယ်..
recovery ကနေ Install update from external card ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ ဒါဆိုရင် သူဟာသူ Install လုပ်ပြီး...ပြီးသွားရင် Restart ကျသွားပါလိမ့် မယ်။ ပြန်တက် လာရင်အဆင်ပြေပါပြီ။
မှတ်ချက်။ ။ မှားမှာစိုးလို့ Card ထဲကို dload ဆိုတဲ့ folder လိုက်ထည့်ရမှာနော်
ရေးတဲ့အချိန် 6:30 AM2comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Hauwei Y511-U00 firmware နှင့် တင်နည်း
Huawei Y511-U00 တစ်လုံးကို မြန်မာစာ ထည့်တာ Logo မှာတင် ရပ်နေတာနဲ့
တော်တော်လေး ရှာလိုက်တော့မှ china site တစ်ခုကနေ တွေ့တယ်...
အောက်က link မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါနော်...
Huawei Y511-U00 Firmware
အဲဒီမှာ3file ရှိတယ်...
01_HUAWEI_Y511-U00_XSJZB_ydss_by_ZX.zip တစ်ဖိုင်ပဲ ဒေါင်းပြီး ရေးရင် အဆင်ပြေပါတယ်...
ကျွန်တော်တော့ သုံးဖိုင်လုံး ဆွဲလိုက်ရတယ်...
Huawei Y511-U00 firmware ပြန်တင်သူအားလုံး အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ...
1. 01_HUAWEI_Y511-U00_XSJZB_ydss_by_ZX.zip ကို အရင်ဆုံးဖြည်ချပါ...
2. SP_Flash_Tool_v3.1316.0.150 ဖိုဒါ ထဲမှ အပြာရောင်လေးနဲ့ Flash_tool.exe ကို run ပေးပါ...
3. Scatter-loading နေရာတွင် ဖြည်ထားသော ဖိုဒါထဲမှ
MT6572_Android_scatter_emmc.txt ကို ရွေးပေးပါ...
4. Firmware -> Upgrade ဆိုတာလေးကို နှိပ်ပါ...
5. ဖုန်းကို battery ဖြုတ်ပြီး 5seconds လောက်ထားပါ...
6. battery ပြန်တပ်ပြီး မည့်သည့် ခလုတ်ကိုမှ မနှိပ်ပဲ USB ကြိုးချိတ်ပါ...
7. Driver မသိလျှင် ကွန်ပျူတာ ရဲ့ Device Manager မှ ကျွန်တော်တို့ ဖြည်ထားခဲ့တဲ့ ဖိုဒါထဲမှ MTK USB Driver ဆိုသော ဖိုဒါလေးကို ရွေးပေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားပါပြီ...
Huawei G6-C00 ကို Root, Network Unlock and Myanmar font ကို bat file နဲ့
Huawei G6-C00 ကို Root, Network Unlock and Myanmar font အတွက် bat file
နဲ့ အလွယ်တကူလုပ်လို့ရအောင် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
အရင်ဆုံးတော့ Bootloader unlock code တောင်းရပါမယ်။
Bootloader unlock code ကို >>> ဒီကနေ <<< တောင်းလိုက်ပါ။
SN တို့ IMEI တို့ကို Phone ရဲ့ အနောက်မှာပါတဲ့ စာလုံးများနှင့်တောင်းပါ။
လုံးဝ ရပါတယ် ... မြန်လဲမြန်ပါတယ်။
Unlock code ရပြီဆိုရင်တော့ လိုအပ်တာလေးကို.......
>>>>>>> ဒီကနေယူလိုက်ပါ။ <<<<<<<
Phone ကို USBDebugging ကို on , Unknow Source ကို on ပြီး PC (Computer)
နဲ့ Connect လုပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင်တော့ bat file မှာ ပါတဲ့နံပါတ်တွေအတိုင်း မိမိနှစ်သက်သလို အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
ဒီ bat file ကို ပြုလုပ်ဖန်တီးသူကတော့ Developer ကိုရဲကြီး ပါ။
Credit : ကိုရဲကြီး
Ph အတွက် Auto Shutdown အချိန်ပေးထားပီးတော့ ပိတ်ခိုင်းလို့ရပါတယ် Dowload ဆွဲထားပီးအိပ်တော့မယ်ဆို ပီးလောက်မယ့်အချိန်လေးကို OFF ခိုင်းထာလိုက်ပေါ့ဗျာ/.........
Download : ( )MB
Zippyshare ** အဆင်ပြေပါစေဗျာ။
Phone Lock Screen ကို Double Touch နဲ့ ဖွင့်နိုင်တဲ့ tecnology.angs.knockr.apk
ဒီ software လေးက တော်တော်လေးကို မိုက်တယ်ဗျ။
ကိုယ့် Phone ရဲ့ Power key ကို လုံးဝထိစရာမလိုပဲ Screen ကို Double Touch နဲ့
ဖွင့်လို့ရမဲ့ application လေးပါ။
application လေးထဲကို ၀င်ပြီး Double Touch လုပ်တဲ့အခါ ကိုယ်ဖွင့်ချင်တဲ့
application ကို ၀င်ပြီး on ပေးထားရင် lock ဖွင့်တဲ့ အခါ ကိုယ်ပေးထားတဲ့ application ကို
Double Touch စနစ်နဲ့ဖြစ်တာကြောင့် Screen ကို ထိမိရုံနဲ့ Power ပွင့်မှာကိုလဲ မပူရပါဘူး။
Double Touch နေရာမှာ တခြားပုံစံလဲ ထားလို့ရပါတယ်။
>>>>>>> ဒီကနေ ယူလိုက်ပါ။ <<<<<<<
>>>>>>> ဒီကနေလဲ ယူလို့ရပါတယ်။ ☺ <<<<<<<
Huawei Honor 3C ကို Root လုပ်နည်း
Huawei Honor 3C ကို Root လုပ်ရန်အခက်အခဲဖြစ်နေသူများအတွက်
>>>>>>> Honor3C_Insecure_Boot_.zip <<<<<<<
>>>>>>> Honorc 3C Super Boot.zip <<<<<<<
>>>>>>> SP_Flash_Tool_v5.1352.01.rar <<<<<<<
ဒေါင်းပြီးပြီဆိုရင် စကြတာပေါ့ ☺
Boot file နှစ်ခုရှိပါတယ်။
1. ပထမပေးထားတဲ့ Honor3C_Insecure_Boot က Custom Recovery သဘောမျိုးပါ။
အဲဒီကောင်လေးကို ပေးထားတဲ့ SP Flash Tool လေးကိုဖွင့်ပြီး Boot ရွေးတဲ့နေရာမှာ
အဲဒီကောင်လေးကို ထည့်ပြီး Flash ပေးလိုက်ပါ။
Flash ပြီးရင်တော့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Root Tool နဲ့ Root နိုင်ပါပြီ။
2. ဒုတိယပေးထားတဲ့ Honorc 3C Super Boot ကတော့ တစ်ခါထဲ Root ဖောက်
Myanmar Font ထည့်နိုင်တဲ့ Boot file ပါ။
ဒီကောင်ကိုလဲ သုံးမယ်ဆို SP Flash Tool လေးနဲ့ပဲ သုံးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမ Boot file ကတော့ ကိုဝင်းကမ္ဘာကျော် upload လုပ်ထားတာလေးပါ။
ဒုတိယ Boot file ကတော့ ကိုဖြိုးချမ်း ရဲ့ Boot file လို့ သိရပါတယ်။
Credit : ကိုဝင်းကမ္ဘာကျော် နဲ့ ကိုဖြိုးချမ်း
Samsung Device version 4.3 & 4.4.2 CWM များ
Samsung Device version 4.3 နဲ့ 4.4.2 အတွက် CWM တစ်ချို့ကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
CWM လိုအပ်နေသူများ အတွက် ကျတော့်မှာရှိတဲ့ CWM လေးတွေကို Upload တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
လိုအပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ရယူလိုက်ပါ။ မလိုအပ်ရင်လဲ ဆောင်ထားပါ နောက်လိုအပ်လာရင် အဆင်ပြေပါတယ်။
ကျတော် RAR File နဲ့ ချုပ်ပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
version 4.3 rar မှာဆိုရင်
version 4.4.2 rar မှာဆိုရင်
S5 LTE G900F & G900T
>>>>>>> Download Here version_4.3_CWM.rar <<<<<<<
>>>>>>> Download Here version_4.4.2_CWM.rar <<<<<<<
၁၂.၂.၂၀၁၄ ကမှ ထွက်ထားတာပါ။
ယခုချိန်ထိတော့ နောက်ဆုံးလို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။
Base Number B131 ပါ။
လိုချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ယူလိုက်ပါ။
ရေးတဲ့အချိန် 7:43 PM 1 comment: ရေးသားသူ Android လုလင်
Version 2.4 နဲ့ update တက်ထွက်လာတဲ့ Zapya apk
Version 2.4 နဲ့ update တက်ထွက်လာတဲ့ Zapya apk လေး ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
Transfer လုပ်တဲ့ နေရာမှာ အလွန်မြန်ဆန်တာကြောင့် လူသိများ လူကြိုက်များ တဲ့
အခု update version လေးကို စိတ်ဝင်စားရင်တော့.......
>>>>>>> ဒီကနေရယူလိုက်ပါ။ <<<<<<<
Coolpad 5217 version 4.3 ကို Root မလို Myanmar Font ထည့်မယ်
Coolpad ကတော့မြန်မာပြည်ကိုထိုးဖောက်တဲ့ brand တစ်ခုပါပဲ။
huawei လိုပဲ သူကလည်း firmware ရေးရလွယ် မြန်မာစာထည့်ရလွယ် ပြီး ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ အသုံးပြုနိုင်တာမို့ ခုဆိုရင် လူကြိုက်များနေကြပါပြီ။
ခုတော့ Coolpad ကို မြန်မာစာထည့်နည်းလေးပေါ့
ကျနော် ကိုယ်တိုင်လည်း အဆင်ပြေနေတာလေးမို့ ပြန်လည်မျဝေလိုက်ပါတယ်။
ကျနော် Coolpad ဆိုပြီး lable သစ်တစ်ခုပါ ထပ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။
နောက်ကျနော်အားရင် Coolpad နဲ့ ပတ်သက်တာ အကုန်တင်ပေးတော့မှာပါ။
Coolpad 5217 ကို version 4.3 နဲ့ Root လုပ်လို့မရသေးတဲ့ အခြေအနေမှာ
Myanmar Font အတွက် အဆင်ပြေအောင် ကိုကျော်ဇေယျာမင်း မှ
without root MM Font.exe လေးကို ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။
အားလုံး အဆင်ပြေအောင် ကျတော်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
without root MM Font.exe လိုအပ်သူများ.......
>>>>>>> ဒီကနေ ရယူပါ။ <<<<<<<
Phone ကို USB Debugging တို့ Unknow Source တို့ on ပေးပြီး
PC (Computer) နဲ့ Connect လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
PC မှာ Phone ကို သိပြီဆိုရင်
without root MM Font.exe လေးကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
Auto အလုပ်လုပ်ပြီး Phone မှာ Reboot ကျသွားပါမယ်။
Home Screen ကို ပြန်တက်လာပြီဆိုရင်တော့ Keyboard တစ်ခုခု နှစ်သက်ရာ
ထည့်ပြီး Myanmar Font သုံးလိုက်ပါ။
Credit : ကိုကျော်ဇေယျာမင်း
ရေးတဲ့အချိန် 12:13 AM2comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
အကြောင်းအရာ Coolpad Myanmar Font
V_Root version 1.7.7
အားလုံးသိပြီးတဲ့ အတိုင်း Root လုပ်တဲ့နေရာမှာ အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်တဲ့
V-Root ဆိုတဲ့ Root Tool လေး version 1.7.7 နဲ့ update ထွက်ရှိလာတာလေးတွေ့လို့
ရေးတဲ့အချိန် 11:57 PM3comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
UNI Android Tools service သမားတွေ ဆိုင်သမားတွေ အတွ...
သင့် ဖုန်းကိုလေလေးတစ်ချက်မှုတ်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ Lock ...
Huawei G6-C00 ကို Root, Network Unlock and Myanmar...
Phone Lock Screen ကို Double Touch နဲ့ ဖွင့်နိုင်တ...
Coolpad 5217 version 4.3 ကို Root မလို Myanmar Fon...